Safiirka Soomaaliya u fadhiya Washington DC oo la kulmay Jaaliyadda Ohio “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Columbus Ohio ayaa kulan soo dhaweyn ah la qaatay u qeybsanaha Dowlada Soomaaliya ee dalka Mareykanka Danjire Cali Sharif Axmed .
Safiirka iyo xubnaha safaarada qaar oo ku wehliyay socdaalkan waxa uu ujeedkoodu ahaa sidii la isugu xiri lahaa Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka iyo Safaaradooda Washington DC oo ahmiyad weyn ugu fadhida.
Socdalka Safiirka waxaa dhankiisa ku wehliyay safiirka Dowladda Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay Abuukar Cismaan oo dhankiisa howlo muhiim ah u hayo Bulshada iyo dowladda Soomaaliyeed.
Danjire Cali Shariif Axmed iyo safaaradda ayaa looga fadhiya hawlo baddan oo ay ka mid yihiin, isku xirka shacabka dibadda jooga iyo dowladadooda, xalinta dhibaatooyinka gudaha Mareykanka ku qabsada Jaaliyadda, sida carruurta xabsiyadda ka buuxda, xal u helidda dadka sharci la’aantu hayso ee dowladda Mareykanku musaafuriso, mushkiladda xawilaadaha ee Bangiyada iyo arimo kale oo aad u badan.
Safiirka oo kulamo gooni gooni ah la qaadanayay qeybaha bulshada waxa uu balan qaaday in safaaraddu qaban doonto howlaha loo igmaday iyo in ay ka soo dhalaali doonaan rajada Jaaliyadaha Maraykanku ka qabaan isbadal lagu sameeyo sidii safaaraddu irdaha ugu furi lahayd wax walba oo ay tahay in ay ka xigsato dadka Soomaaliyeed.
Safirka waxa uu amaanay horumarka ay sameeyeen Jaaliyadda reer Columbus ee dhanka Ganacsiga, Waxbarashada, muujinta sida dadka Soomaaliyeed u yihiin dad wax soo saar iyo sida ay ugu xiranyihiin dalkoodii oo ay kaga qeyb qaataan wax walba oo kaga soo aadaa, dhanka dhaqaalaha, Siyaasadda iyo horumarka .
Jaaliyadda ayuu ugu baaqay in ay maalgashi ku sameeyaan dalkooda isla markaana xiliyada fasaxa iyo waqtiyo fiicanba ay dalkooda ku soo qaataan si ay wax badan uga ogaadaan xaalada dalkooda iyo is badalka la hiigsanayo.
Waxa uu safiir Cali tegi doonaa dhamaan goboladda ay Soomaalidu dagantahay ee Mareykanka, isaga oo ka shaqeyn doona isku xirka Jaaliyadda lafteeda iyo safaaraada.
Xubnihii Jaaliyadda ee ka hadlay kulanka waxa ay safiirka ku booriyeen in la adkeeyo Ilaalinta sharafta iyo Karaamada Ummadda Soomaaliyeed oo ay Safaaraddu u taagantahay matalaadooda.
Waa markii ugu horeysay oo uu safiirku la kulmo Jaaliyadda tan iyo intii la soo magacaabay labo bil ka hor xilkan, isaga oo sii wadi doona kulamadiisa.